Ogaden News Agency (ONA) – Ruushka oo Diblomaasiyiin British Ah Masaafuriyay.
Ruushka oo Diblomaasiyiin British Ah Masaafuriyay.
Posted by ONA Admin	/ April 1, 2018
Ruushka ayaa ku wargeliyay wadanka Britain in wadar ahaan in ka badan 50 kamid ah diblomaasiyiintooda ay tahay inay ka baxaan dalka ruushka, iyadoo uu sii xoogeysanayo muranka ku saleysan sumeyntii UK loogu geystay jaajuus hore oo Ruushka u dhashay iyo gabadhiisa oo dhawaan lasumeeyay.
Moscow ayaa horay u eriday 23 diblomaasiyiin u dhashay dalka Britain kaddib markii London ay ku amartay 23 diblomaasiyiin Ruushka u dhashay inay dalkeeda ka baxaan. Balse hadda Ruushka ayaa ku adkeysanaya in diblomaasiyiin dheeraad ah oo Britain u dhashay ay tahay inay baxaan.
Wuxuu Ruushku qabaa in tirade diblomaasiyiinta labada dal midba kan kale ka jooga inay isku mid noqdaan. Tan ayaa la micno ah in ugu yaraan 27 saraakiil kale oo UK u dhashay gurigooda loo dirayo. Britain ayaa ku eedeyneysa Ruushka inuu ka dambeeyay weerarkii suntan neerfaha waxyeeleysa ee loo geystay Sergei iyo Yulia Skripal. Moscow ayaase dafireysa arinkaas.